Izixhobo ezisibhozo eziSimahla zaSimahla zeMizobo kunye nabaYili beWebhu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izixhobo ezisibhozo eziSimahla zaSimahla zeMizobo kunye nabaYili beWebhu
Ukuba uyigrafiki okanye uyilo lwewebhu, kuya kufuneka uyazi loo nto kukho izibonelelo ezahlukeneyo nezangoku isimahla, onethuba lokongeza kweyakho "ibhokisi yezixhobo".
Ke ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi na ezi zixhobo, qhubeka ufunda, ukusukela ngeloxesha sizakuthetha ngezi zixhobo zintsha kunye nezintsha ezingenayo umyili wemizobo okanye iwebhu kufuneka ilahlekile.
Izixhobo zasimahla zabaqulunqi bemizobo
Oovimba bokuqala esiza kuthetha ngabo Mlawuli, Eliphepha lokujongana simahla elungiselelwe iWindowsPress.
Okwangoku inikezela ngomsebenzi omtsha wokuhlela, apho kunokwenzeka ukuba wenze ngokwezifiso uyilo lwewebhusayithi yakho, ukuze ilingane naluphi na uhlobo lweselfowuni kunye / okanye ithebhulethi, ngendlela ebonakalayo.
Ngokusebenzisa i-Elementor, unethuba lokwenza njalo tshintsha iodolo yeekholamu, Guqula ubungakanani beefonti ozisebenzisayo, zilungelelanise zonke izinto kwindawo enye, nokuba ngasekunene, ngasekhohlo okanye embindini, kunye nokukwazi ukuchaza iindlela ezahlukeneyo zomda.
Ngaphandle kwamathandabuzo, inyangwa ngendlela entsha ngokupheleleyo amaphepha ewebhu angenziwa yeWordPress, ukuze babe nembonakalo engcono xa bejongwa nakoluphi na uhlobo lwesixhobo se-elektroniki.
Yiyo ingqokelela entle nenomtsalane Iimpawu zeRetro, Ezinefomathi nganye ye-EPS. Le mifuziselo inomxholo wokuba kunokwenzeka ukuba uyikhuphele simahla nge-tweet kwi-Sellfy.
Iimpawu zokuhamba ngombala
Iimpawu zokuhamba ngombala luluhlu lweempawu ezinomtsalane eziyilwe nguIimpawu 8msgstr "ngokukodwa Idepho yoMyili weWebhu. Eli qela leempawu lineempawu ezimalunga nama-60, ukongeza ekubeni zinombala opheleleyo, nganye inxulumene ngokupheleleyo nohambo.
Iqukethe uhlobo olukhululekileyo lwento eyaziwayo typographic ifonti, eyasungulwa ekuqaleni njengefonti ekwakufuneka ihlawulwe ukuze isetyenziselwe, yiyo loo nto banee-glyphs ezimbalwa, nangona kunjalo, iyaqhubeka nokuba yinto entle yokuchwetheza evumela ukuba isetyenziswe zombini xa kuyilwa ilogo kwaye xa kusenziwa isihloko.
Oku yi ifonti yokubiza eneempawu ezithile ezizodwa, phakathi kwazo kukho iigigature, iitheminali kunye nokudumba.
Uhlobo lochwethezo lwaseBerlin
Uhlobo lochwethezo lwaseBerlin, iqukethe iqela leefonti zokubonisa eziphefumlelwe ziindidi ezahlukeneyo zohlobo oluchanekileyo lokuchwetheza, ezinye iileta zejiyometri ezakhutshwa ekuqaleni kwenkulungwane edlulileyo Kude kube ngoku, uhlobo lokuchwetheza lwaseBerlin Iinguqulelo ezingama-4 kwaye nganye iyafumaneka kububanzi obu-3, eziqhelekileyo, ezinesibindi kunye nesibindi.
Inkungu Photoshop iibrashi
Inkungu iibrashi zimalunga nothotho olukhulu lwe Iifoto ze-Photoshop, apho kunokwenzeka ukongeza isiphumo senkungu kulo naluphi na uhlobo lokufota okanye umzobo okanye iprojekthi yoyilo lwewebhu.
Iimpawu zeVector media
Iimpawu zeVector media, Inesixhobo esiluncedo kakhulu kwiiapps zewebhu, kuba imalunga uthotho lwee icon zeendaba ezifumaneka kwifomathi yevektha.
Umxholo wepotifoliyo wehlabathi
Umxholo wepotifoliyo weHlabathi umalunga itemplate eyenzelwe ngokukodwa iiwebhusayithi, Efumaneka kwifomathi emangalisayo yePSD; ithe template kwabelwana ngayo Iingcinga.
Njengoko ubona, ezi zizibonelelo ezisibhozo ukongeza ekubeni zibekho ikhululekile ngokupheleleyo, ziya kuba zilungele ngokupheleleyo nawuphi na umyili wemizobo okanye umyili wewebhu, nokuba uqala ngoku okanye sele unamava kwihlabathi loyilo.
Ezi zixhobo ziya kukunika ithuba yenza iiprojekthi zakho ngendlela engcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Izixhobo ezisibhozo eziSimahla zaSimahla zeMizobo kunye nabaYili beWebhu
Ndiyilandela le bhlog kakhulu, ndifunde izinto ezininzi kwaye ndikwazile ukufumana izixhobo. Uxolo andikaze ndibhale, kodwa ngeli xesha ndibhala kukushiya isikhalazo esincinci, kuba sithetha ngezixhobo, sizithiye amagama, kodwa andiboni mthombo wokuzikhuphela, ndicinga ukuba esi sithuba senziwe isiqingatha.
UJorge Neira sitsho
Mauricio, uxolo ngenxa yempazamo.
Phendula Jorge Neira
Enkosi, kwaye kukho ezinye izithuba ezinengxaki efanayo, ndiyathemba ukuba bayayilungisa.
Ingcuka engwevu sitsho
Enkosi ngolwazi olugqwesileyo. Iyasebenza kakhulu yonke into!
Fumana indlela yokusebenzisa iifilitha kwi-Photoshop ngesi sikhokelo